गोल्यान समूह : टेक्सटायल, ऊर्जा र आवास योजनामा केन्द्रित | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल गोल्यान समूह : टेक्सटायल, ऊर्जा र आवास योजनामा केन्द्रित
स्वदेशी बजारलाई चाहिने सबैखालको धागो आपूर्ति गर्ने गोल्यान समूह नेपालको सबैभन्दा ठूलो धागो उत्पादक हो । समूहअन्तर्गतको रिलायन्स स्पिनिङ मिलले उत्पादन गर्ने सुती तथा सिन्थेटिक धागो भारत, बङ्गलादेश र टर्की निर्यात हुन्छ ।
यस समूह धागोसँगै सिन्थेटिक कपडा र पोलि–प्रोप्लिन प्लाष्टिक ब्याग (जुट बोराको सट्टामा प्रयोग हुने)को व्यवसायमा पनि संलग्न छ । समूहअन्तर्गतको ट्राइकोट इण्डष्ट्रीले उच्च मूल्यका स्वेटर, पश्मिना तथा अन्य उत्पादन तयार गरी जर्मनी, इटलीलगायत देश निर्यात गर्दछ । त्यस्तै, समूहकै अर्काे कम्पनी शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिजले सिमेण्ट उद्योगका लागि चाहिने पोलि–प्रोप्लिन ब्याग (सिमेण्ट राख्ने बोरा) र टार्पाेलिन (त्रिपाल) उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ ।
ऊर्जाका आयोजनामा लगानी बढाउनेतर्फ लागेको यो समूहले नेपालका विभिन्न व्यावसायिक समूहसँगको साझेदारीमा ऊर्जाका तीन आयोजनामा लगानी गरेको छ । यी आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता २ सय मेगावाट छ । आगामी १० वर्षमा १ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको समूहले निर्माणाधीन माथिल्लो बलेफी–४६ मेगावाट, बलेफी हाइड्रो ३६ मेगावाटमा लगानी गरेको छ । साथै नेपालगञ्जमा रहेको २० मेगावाटको सोलार परियोजनामा पनि यसले लगानी गरेको छ । त्यसबाहेक यो समूह ३५ मेगावाटको भोटेकोशी र ९७ मेगावाटको केएनबीआर इस्वा हाइड्रोमा पनि लगानी गर्ने योजनामा छ ।
यो समूह शहरीकरणसँगै बढेको निजी आवासको बढ्दो माग पूर्ति गर्न सामूहिक आवास निर्माणमा पनि संलग्न छ । समूहअन्तर्गतको वेष्टार प्रपर्टिजले र रेसिडेन्सेस् एट हायात प्लेसले आवासीय अपार्टमेण्ट निर्माण तथा विक्रीवितरण गर्छ । समूहसँग बालकुमारी र सोल्टीमोडमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न दुई अपार्टमेण्ट कम्प्लेक्स छन् ।
समूहले विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक फर्ममार्फत करीब रू. १५/२० अर्बको वार्षिक कारोबार गर्दछ । समूहको धागो कारखानामा अधिकांश स्वचालित मेशिन जडान गरेको भए पनि त्यहाँ ४ हजार जनाले काम गर्छन् । गोल्यान समूहले कुल ५ हजारभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
नेपाली कपडाको बजारीकरणका लागि समूहले सगरमाथा, राष्ट्रिय झण्डा र नेपालको नक्साको चिह्न प्रयोग भएको लोगोसहितको आफ्नै ब्राण्ड बनाएको छ । समूहले जारालगायत अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका तयारी कपडामा नेपाली धागो प्रयोग हुनेगरी दुईपक्षीय सम्झौतासमेत हुन लागेको बताएको छ ।
गोल्यान समूहको इतिहास
सन् १९५० मा समूहका संस्थापक सोहनलाल गोल्यान नेपाल घुम्न आएका थिए । नेपाल बसाइका क्रममा उनको ध्यान नेपालबाट भारत र चीनतर्फ व्यापार/व्यवसाय गरेर पर्याप्त मुनाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावनाप्रति केन्द्रित भयो । पछि उनी फेरि नेपाल आए र एक व्यावसायिक फर्म स्थापना गरी मसला, तयारी कपडा, विद्युतीय उपकरण र स्टेशनरीका सरसामानको व्यवसाय थाले । व्यवसायबाट क्रमशः सफलता पाएपछि उनले त्यसबाट आएको नाफा सङ्कलन गरी सन् १९६० मा बटन फ्याक्ट्री खोलेका थिए, जुन समूहले स्थापना गरेको पहिलो उत्पादन उद्योग थियो । गोल्यान समूहको बलियो व्यावसायिक यात्रा त्यहीँबाट आरम्भ भएको हो ।
सन् १९९० मा यो समूहले एमएस समूहसँगको साझेदारीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल स्थापना गर्‍यो । यो धागो कारखाना समूहको अत्यन्त सफल उद्योग हो । समूहले यसै मिलबाट विभिन्न किसिमका धागो उत्पादन गरी स्वदेशी बजारलाई आपूर्ति गर्नुका साथै भारत, बङ्गलादेश र टर्की निर्यात गर्छ । धागो उत्पादनका ६ अलग–अलग एकाइ रहेको रिलायन्सले अहिले करीब रू. ६ अर्ब ५० करोडको वार्षिक कारोबार गर्दछ ।
यस समूहले सन् १९९८ देखि शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज सञ्चालनमा ल्यायो । यो उद्योगले टार्पाेलिन (त्रिपाल) र सिमेण्ट उद्योगका लागि चाहिने पोलिप्रोप्लिन बोरा उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्दछ ।
गोल्यान समूहको प्रमुख व्यवसाय
यस समूहको मुख्य व्यवसाय भनेको नै विभिन्न रङ, किसिम र गुणस्तरका धागो उत्पादन तथा विक्रीवितरण हो । सन् १९९० मा समूहले एमएस समूहसँग साझेदारी गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल स्थापना गरेको थियो । जुन मिल अहिले देशकै ठूलो धागो मिल हो । विराटनगरनजीकै खनारमा रहेको धागो मिलले विभिन्न देशबाट कपास आयात गरेर सुतीको धागो र स्वदेशी कच्चापदार्थ तथा फाइबरबाट सिन्थेटिक धागो उत्पादन गर्दछ । यस मिलबाट उत्पादन भएको सुती र सिन्थेटिक धागो स्वदेशी कपडा उद्योगले पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सिन्थेटिक तथा अन्य धागो भारत, बङ्गलादेश र टर्की निर्यात हुन्छ । धागोको मात्र कारोबार गर्ने रिलायन्सले वार्षिक रू. ६ अर्ब ५० करोडको कारोबार गर्दछ । धागो मिलले १५ सय महिलासहित ४ हजारभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
बढ्दो शहरीकरणसँगै बढेको निजी आवासको माग पूर्ति गर्न गोल्यान समूहले सुविधासम्पन्न आवासका परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । समूहअन्तर्गतको वेष्टार प्रपर्टिजले आवासीय अपार्टमेण्ट बनाउने तथा विक्रीवितरण गर्ने गर्दछ । समूहले बालकुमारी र सोल्टीमोडमा निर्माण गरेका दुई अपार्टमेण्ट अहिले विक्रीवितरणका लागि खुला छन् ।
बैङ्क तथा बीमा
गोल्यान समूह दुई बैङ्क तथा दुई बीमा कम्पनीमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा सहभागी छ । यो समूह एनआईसी एशिया बैङ्क र एनएमबी बैङ्कको प्रवर्द्धक हो । त्यस्तै, दुई जीवन बीमा कम्पनीहरू एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवर्द्धक पनि यही समूह हो ।
समूहले वेष्टार हस्पिटालिटीअन्तर्गत काठमाडौंमा हायात प्लेस नामको होटल पनि सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । सन् २०१९ मा खुला गर्नेगरी अहिले निर्माणको चरणमा रहेको हायात प्लेस हायात होटल कर्पोरेशनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने र यसमा संसारमा उपलब्ध अत्याधुनिक सेवासुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
समूहले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न २०/२५ जना सदस्य रहेको छुट्टै संस्था स्थापना गरेको छ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको जयन्त गोल्यान फाउण्डेशनले महिला तथा कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने शीप विकासका तालीम तथा सहयोग गर्दछ ।
हाल फाउण्डेशनले पाँच जिल्लाका कृषकलाई दुग्ध सङकलन केन्द्र स्थापनाका लागि सहयोग गरेको छ । साथै, कपास उत्पादनलगायत कृषि व्यवसायसम्बन्धी तालीम दिइसकेको छ । समूहले तालीम दिएका कृषक तथा महिला उद्यमीका उत्पादनको बजारीकरणमा पनि समूहले सहयोग गर्ने गरेको छ । समूहका निर्देशक अक्षय गोल्यानले आम नेपालीको विकास गरेर समुन्नत देश विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले समूहले फाउण्डेशन स्थापना गरिएको बताए ।
समूहको क्षेत्रगत उपस्थिति
रिलायन्स स्पिनिङ मिल (सन् १९९४)
शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज (सन् २०००)
ट्राइकोट इण्डष्ट्री (सन् १९९९)
एनआईसी एशिया बैङ्क
घरजग्गा (रियल इस्टेट)
रेसिडेन्सेस् एट हायात प्लेस
वेस्टार हस्पिटालिटी नेपाल
माथिल्लो बलेफी (४६ मेगावाट)
बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी (३६ मेगावाट)
भोटेकोशी खोला हाइड्रो (३५ मेगावाट)
केएनबीआर इस्वा हाइड्रोपावर (९७ मेगावाट)
सोलार प्रोजेक्ट (२० मेगावाट)
समूहको लगानी योजना र साझेदारी
१० वर्षमा १ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने
निर्माणाधीन हायात प्लेस होटल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने
२ सय ५० अपार्टमेण्टको आवास परियोजना (वेष्टार रेसिडेन्सी÷रेसिडेन्सेस् एट हायात प्लेस) सम्पन्न गर्ने
नेपाली कपडाको ब्राण्ड बनाएर बजारीकरण गर्ने
जारालगायत अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका तयारी कपडामा नेपाली धागो प्रयोग हुनेगरी दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने
रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा एमएस समूहसँग साझेदारी
विभिन्न व्यावसायिक समूहसँगको साझेदारीमा नवीकरणीय ऊर्जाका चार परियोजनामा लगानी
करीब २० अर्ब
५ हजार भन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी